Mayelana nathi - Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd.
I-Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd inenqubo nekhono eliphelele lephrojekthi ye-R & D, manje ineminyango eyi-8 kufaka phakathi ubuchwepheshe, ilabhorethri, imishini, ukwakhiwa kwemboni, inqubo yokukhiqizwa kwesivivinyo, enabasebenzi abangaphezu kwama-90. Inkampani yethu ineqembu eliphelele lokulethwa kokukhiqizwa kanye neqembu lokuphathwa kwekhwalithi, inani labasebenzi abangaphezu kuka-110, abangaqinisekisa ngempumelelo ukulethwa kwekhwalithi ephezulu futhi okufika ngesikhathi sensimbi ngayinye kumakhasimende.
Ibhizinisi eliyinhloko loMnyango Wezokuphepha weJunray
Ibhizinisi eliyinhloko kufaka phakathi imaski, abahloli bengubo yokuhlinza, izinsimbi zokuhlola amagumbi ahlanzekile, isihlungi se-HEPA sokuhlola ikhabethe le-biosafety, ama-microbe sampling kanye nezinsimbi zokuhlaziya, izinsimbi ezikhiqiza i-aerosol nezokuhlola. Ngaphandle kwalokho, sihlinzeka ngezifiso zesampula ze-aerosol kanye nezixazululo ze-bio-sampling.
Kusukela kwaqhamuka ubhadane lwe-COVID-19 ekuqaleni konyaka we-2020, omaski abazithuthukisile kanye nezinsimbi zokuhlola imishini yokuvikela kanye nezinsimbi zesampula zamagciwane kusetshenziselwe ukuhlinzeka ngokuvikelwa okuqinile kwezokwelapha kubasebenzi bezokwelapha kanye nomphakathi ezibhedlela zasekhaya nakwamanye amazwe, amayunithi wokuhlola amadivayisi wezokwelapha , izikhungo zokuhlola ukudla nezidakamizwa namanye amayunithi. Phakathi kwazo, ukusebenza kahle kokuhlunga izinhlayiya ze-ZR-1006 kanye nomtshina wokumelana nomoya, umhloli we-ZR-1000 mask wokuhlunga amagciwane (BFE) athunyelwe eJalimane, eBrithani, eSingapore, e-Indonesia nakwamanye amazwe.
Engeza: No.1 XueYue Road, Chengyang District, Qingdao Idolobha, Isifundazwe Shandong, China
I-imeyili: xupengfei@zryq.cn umkhumbi@zryq.cn